Ikhaya elimangalisayo e-Izzalini elinamagumbi okulala ama-4
Indlu entle yeeholide yamatye enombono wepanoramic ebekwe kwi-11 km ukusuka eTodi.
Ipropathi ijikelezwe buhlaza kwaye umhlaba ojikelezileyo uthambekele ezantsi kumathambeka ukuya kwindawo engezantsi. Kude kufuphi kukho indawo enemidlalo yangaphandle yabantwana kunye nolutsha. Ipropathi yonke ibiyelwe ngokupheleleyo. Ingaphakathi lifakwe ngononophelo kwaye iveranda etofotofo ejonge umhlaba ikuvumela ukuba utye ngaphandle uphumle ngokupheleleyo.
Indlu yasefama isasazwe kumanqanaba amathathu: umgangatho ongaphantsi, umgangatho ophantsi kunye nomgangatho wokuqala. Kumgangatho ophantsi kukho amagumbi okuhlala amathathu, amabini kuwo anokufikelela ngaphandle kunye nekhitshi. Kumgangatho wokuqala igumbi lokulala eli-1, 2 kunye ne-3 kunye namagumbi okuhlambela amathathu. Umgangatho ongaphantsi ufikeleleka ukusuka ngaphandle nangaphakathi kwaye unikezela ngamagumbi amabini okuhlala axhotyiswe ngemidlalo yabantwana kunye negumbi lokuzilibazisa elinomzila omkhulu weemoto zomdyarho, igumbi lokulala le-4 (ibhedi yesiFrentshi) kunye negumbi lokuhlambela elinye. Kwindawo yangaphandle kukho i-badminton net, itafile ye-ping-pong, ibala lebhola lebhola elincinci lengca.
Sikufuphi neTodi, idolophu entle ephakathi egcwele iimyuziyam kunye nemisebenzi. Ubuhle bommandla ongummelwane lixabiso elongezelelweyo kwiindwendwe ezikhetha le ndawo kwiiholide zabo, ukongeza ngokuqinisekileyo ukutya okutyebileyo kunye nesithethe sewayini, eziye zahlala zinamandla e-Umbria, "i-Green Heart of Italy ".
Idolophu yaseOrvieto (iikhilomitha ezingama-36) yaziwa ngecathedral yayo yasemva kwexesha eliphakathi, enye yezona ndawo zintle zase-Italiya nasehlabathini, kunye nengcebiso "Pozzo di San Patrizio". Perugia 55 km, Assisi 65 km, Lake Trasimeno 80 km, Lake Bolsena 50 km. Uhambo lwemini iRoma (i-120 km) inokufikelelwa ngokulula ngololiwe ukusuka kwisikhululo esikufuphi se-Orvieto Scalo (i-32 km kuphela).
Indlu entle yeeholide yamatye enombono wepanoramic ebekwe kwi-11 km ukusuka eTodi. Ipropathi ijikelezwe buhlaza kwaye umhlaba ojikelezileyo uthambekele ezantsi kumathambeka ukuya kwindawo engezantsi. Kude kufuphi kukho indawo enemidlalo yangaphandle yabantwana kunye nolutsha. Ipropathi yonke ibiyelwe ngokupheleleyo. Ingaphakathi lifakwe ngononophelo kwaye iveranda etofotofo ejonge umhlaba ikuvumela ukuba utye ngaphandle uphumle ngokupheleleyo. Indlu yasefama isasazwe kumanqanaba amathathu: umgangatho ongaphantsi, umgangatho ophantsi kunye nomgangatho wokuqala. Kumgangatho ophantsi kukho amagumbi okuhlala amathathu, amabini kuwo anokufikelela ngaphandle kunye nekhitshi. Kumgangatho wokuqala igumbi lokulala eli-1, i-2 3 kunye ne-3 yokuhlambela. Umgangatho ongaphantsi ufikeleleka ngaphandle nangaphakathi kwaye unikezela ngamagumbi amabini okuhlala axhotyiswe ngemidlalo yabantwana kunye negumbi lokuzilibazisa elinomzila omkhulu weemoto zomdyarho, igumbi lokulala eli-4 (ibhedi yesiFrentshi) kunye negumbi lokuhlambela eli-1. Kwindawo yangaphandle kukho i-badminton net, itafile ye-ping-pong, ibala lebhola lebhola elincinci lengca. Sikufuphi neTodi, idolophu entle yamaxesha aphakathi egcwele iimyuziyam kunye nemisebenzi. Ubuhle bommandla ongummelwane lixabiso elongezelelweyo kwiindwendwe ezikhetha le ndawo kwiiholide zabo, ukongeza ngokuqinisekileyo ukutya okutyebileyo kunye nesithethe sewayini, eziye zahlala zinamandla e-Umbria, "i-Green Heart of Italy ". Idolophu yaseOrvieto (iikhilomitha ezingama-36) yaziwa ngecathedral yayo yasemva kwexesha eliphakathi, enye yezona ndawo zintle zase-Italiya nasehlabathini, kunye nengcebiso "Pozzo di San Patrizio". Perugia 55 km, Assisi 65 km, Lake Trasimeno 80 km, Lake Bolsena 50 km. Uhambo lwemini iRoma (i-120 km) inokufikelelwa ngokulula ngololiwe ukusuka kwisikhululo esikufuphi se-Orvieto Scalo (i-32 km kuphela).
Imigama: indawo yokuhlala ekufutshane 15 m / ivenkile 11 km / yokutyela 200 m / isixeko esikufutshane (Todi) 11 km / amanzi (Lake) 48 km
Le ndlu ifuna idiphozithi ye$339. Iza kutsalwa yodwa yile ndlu ngaphambi kokuba ufike okanye xa ubhalisa xa ufika.